Ọkachamara Semalt na-ekpuchi usoro iji chebe gị site na aghụghọ nke Intanet
Ị ghaghị ịma nke ọma na ịntanetị bụ aghụghọ na ojoro? A na-eji abụọ ahụ eme ihe na-emegharị ọnụ ma na-ezo aka n'otu ihe ahụ. Ihe ojoo na-ezo aka na atụmatụ nke e mere iji mee ka ndị mmadu ghara inweta ego ha n'emeghi ka ha nwee olileanya mgbe mgbe ha na-ekwe nkwa nke ihe a na-ejighi enweta mgbe ego gbanwere aka. Dị ka aha ahụ na - egosi, ịntanetị na - echere ndị na - awagharị weebụ.
Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , Lisa Mitchell, na-akọwapụta nsogbu ndị dị n'ịntanetị iji mee ka ị ghara ịnọ na ya.
Ònye nọ n'ihe ize ndụ?
Onye ọ bụla na-eji ọrụ n'ịntanetị n'oge ọ bụla nakwa site n'ebe ọ bụla n'ụwa nwere ike ịdaba. Ọ dịghị mkpa na ị na-enyocha posts na usoro mgbasa ozi gị, mgbasa ozi ma ọ bụ mkparịta ụka na saịtị nwoke na nwanyị. Kemgbe ọbịbịa ya, ịntanetị enyerela ọtụtụ nde mmadụ aka na-ekiri ihe nkiri, nata ozi, na-agụ blọọgụ, na-arụ ọrụ site n'ụlọ na ọtụtụ ihe. O di nwute, ọgba aghara cyber crime abawanyela.
N'afọ 2017, a kọrọ na ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ cyber bụ 155% karịa afọ gara aga (2016). Nke a adịghị mma. Kedu ka a ga - esi kwe ka nke a mee? N'ezie, anyi kwesiri ighota uzo nile eji eme ihe, o bu eziokwu? Ọfọn, ndị ọjọọ ụmụ okorobịa bụ ihe smart ọgụgụ. Kwa ụbọchị ha na-abịa n'ụzọ ọhụrụ iji nweta ihe ha na-akụghị.
Were ihe atụ nke Nigeria 419 scam..Ọ na-amalitekarị site na ozi-e ma ọ bụ ozi ezigara nwa agbọghọ nwere nsogbu. Ọ ghaghị ịgha ụgha ka ọ bụrụ onye na-elekọta ụlọ, onye ọrụ gọọmentị ma ọ bụ onye azụmahịa si Nigeria ma ọ bụ Sierra Leone. Ugbu a bụ nri azụ: nwanyị ahụ ga - achọ ka ị nyere ya aka inweta ego ya n'aka ụlọ akụ. Kedu? Site n'inye ego ọ na-akwụ maka ego nhazi ego. Kedu ihe ị ga-enweta na nloghachi? Akụkụ buru ibu nke ego ahụ. Nke a anaghị eme. Ozugbo i zipụrụ ego ahụ, nwanyị ahụ na-apụ n'anya ikuku. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha nwere ike ịrịọ maka nkọwa ụlọ akụ gị na nkwupụta ha chọrọ iziga ego na akaụntụ gị. Emela nke a. Akụ akụ gị ga-emebi. Dị ka ndị ahịa ahụ dị oke mma ịbụ eziokwu, ụfọdụ ndị na-eleba anya na ifufe ma na-egwu egwu.
O doro anya na nke a bụ ụdị ihe ojoo kachasị mma n'ebe ahụ. Na nke a, ịnweta ozi na-ahụ maka ndị ọrụ-ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ ntanetị dị ka Paypal. Ha na-ekwu na a ghaghị imelite akaụntụ gị. N'ebe a, ha ga-agwa gị ka ị na ịpị njikọ ma ọ bụ nye nkọwa gị ka ha wee mezie otu ihe ahụ maka gị. A na - eji ọnyà phishing iji zuo ozi nke onwe na nke ego.
Lee ihe atụ a: ọ bụrụ na mmadụ zuo kaadị akwụmụgwọ gị site na akpa gị, ị ga-akpọbata ụlọ akụ ozugbo ka ị gwa ha. N'ụzọ dị mwute, mpụ cyber bụ ihe mgbagwoju anya, ọ bụghị nke ahụ. N'otu aka ahụ, i nwere ike ichebe onwe gị pụọ na nke a niile site na ịmatakwu ụdị ntanetị ọ bụla. Ọ ga-enye gị udo nke uche, ozi gbasara gị ga-adịgide adịgide, ọ dịghịkwa onye ga-emetụ ego gị n'enweghị ikike. Akwụsịla gị n'Ịntanet. Nwee obi ụtọ nke ịntanetị na udo nke uche Source .